အီဒီယံနဲ့ဘန်းစကားတွေကို ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on November 27, 2012 at 20:56 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အရင်တစ်ပတ်က အီဒီယံနဲ့ဘန်းစကားတွေကိုဘာကြောင့်လေ့လာသင့်တယ်ဆိုတာရေးသားခဲ့သလို ဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာကိုတင်ပြပါ့မယ်။ စာရေးဆရာ Mauricio ရေးသားတဲ့
3 Quick Tips To Express Yourself More Fluently In English With Idiomatic Expressions ကိုဘာသာပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှတ်ချက်ကိုတော့ ကွင်းထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်။
တစ်နေ့နေ့မှာ အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာအဖြစ်ပြောတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့အချိန်တွေအများကြီးရင်းနှီးကာ အားထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးတွေကိုသဘာဝကျကျ၊ ထိထိရောက်ရောက်ပြောနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေဟာ အင်္ဂလိပ်စကားကို တည်တည်ခန့်ခန့်နဲ့အပြစ်ဆိုစရာမရှိလောက်အောင် ပြောချင်တဲ့ အများစုသောကျောင်းသားများလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာ တမျိုးကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သာဓကတစ်ခုကတော့ တစ်ခါတုန်းက advance level ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ဟာသတစ်ခုကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ကျိုးစားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပြောတာခမ်းနားလွန်းလို့ ဘုရင်မကြီးကိုပြောနေသလားအောက်မေ့ရတယ်။
မိတ်ဆွေဟာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတစ်ယောက်လုပ်ဖို့တော့မရည်ရွယ်ထားဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခမ်းခမ်းနားနားပြောစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်ပြောသမျှအကုန်လုံးကိုလည်း လိုက်ရှင်းပြနေဖို့မလိုအပ်ဘူးလေ။ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းလေးတစ်ခု၊ ဘန်းစကားလေးတစ်ခုနဲ့တင် ကိုယ်စိတ်ကူးတွေကို လူတွေထံအရောက်ပို့ဖို့က ပိုလွယ်လှပါတယ်။ အီဒီယံတွေဟာ ကိုယ့်အတွေးတွေ၊ အယူအဆတွေကို ဖော်ပြဖို့ ဒီလိုမျိုး အစွမ်းထက်ပါတယ်။ စကားလုံးရာချီပြီးပြောတာထက် ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုထင်ဟပ်တဲ့ သာမန်အီဒီယံတစ်ကြောင်းလောက်နဲ့ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘာဝကျကျ၊ ဌာနေအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေလေသံနဲ့ပြောချင်ရင်တော့ စလုပ်ကြည့်ဖို့ အောက်မှာ အကြံသုံးခုတင်ပြပေးထားပါတယ်။
နည်းနာ ၁။ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေကို သုတေသနပြုကြည့်ပါ။
ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမှာက ကိုယ်ပြောချင်တာသဘာဝကျကျပြောဖို့လိုအပ်တဲ့ အသုံးများတဲ့ အီဒီယံတွေကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ဒါလူတိုင်းသိတဲ့အချက်လို့တော့မပြောပါနဲ့။ ဒီလိုတကယ်လုပ်တဲ့ကျောင်းသား ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိပါသလဲ။ အလွယ်ဆုံးက google မှာ common idiomatic expressions လို့ရိုက်ပြီးရှာကြည့်ပါ။ အသံပါ ပါတာမျိုးဆို ဘယ်လိုအသံထွက်ရသလဲ၊ အသံနေအသံထားပါလေ့လာနိုင်လို့ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် စာဖတ်တဲ့အခါအီဒီယံတွေတွေ့လာပြီဆိုရင် လုံးကောက်ဘာသာပြန်ဖို့မကျိုးစားဘဲနဲ့ အီဒီယံတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
နည်းနာ ၂။ ကိုယ်သိထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ပါ။
အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောဖို့တစ်မျိုးသိပြီဆိုပါက လက်တွေအသုံးပြုဖြစ်အောင်ပြုပြီးများများ လေ့ကျင့်ပါ။ practice makes perfect ဆိုသလိုများများလေ့ကျင့်လေ လေ့လာရတာပိုလွယ်လေပါပဲ။ ဒါကြောင့်မလို့တခြားလူတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီအသုံးအနှုန်းတွေထည့်ထည့်ပြော နိုင်အောင်လုပ်ပါ။
( ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က လှည်းတန်းကဆရာပံသုဆီမှာ ဗမာလက်ဝှေ့သင်တန်းခဏတက်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာကမှတ်စုစာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်ပေးတယ်။ လက်ဝှေ့ပညာထက် အခုထက်ထိမှတ်မိနေတဲ့ ဘ၀အသိပညာလေးတစ်ခု အဲဒီစာအုပ်လေးက မှတ်သားခဲ့ရဖူးတယ်။ အဲဒါကတော့ “ပညာသည်လေ့ကျင့်မှုကိုမမှီ”တဲ့။ ဆိုလိုရင်းက သိုင်းကွက်တွေ၊ နည်းစံနစ်တွေ အများကြီးသိထားပြီး လေ့ကျင့်မှုနည်းတဲ့လူထက် တစ်မျိုကောင်း၊ တစ်ကွက်ကောင်းသာသိပြီး ၄င်းကို ထပ်ကာထပ်ကာအသားကျအောင်လေ့ကျင့်ထားသူကပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့။ ဒီလိုပါပဲ။ အီဒီယံတွေ၊ ဘန်းစကားတွေကို အများကြီးသိထားပြီး လေ့ကျင့်ပြောဆိုမှုမရှိရင်အလကားပဲပေါ့။ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့ ဆိုကြပါစို့။ Whata... ! နဲ့သုံးတဲ့အသုံးလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ သိလိုက်ပြီဆိုရင် အလုပ်ထဲမှာတွေ့သမျှလူနဲ့စကားပြောရတဲ့အခါ အဲဒီစကားမသုံးသုံးရအောင် ဆွဲပြီးပြောတတ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဆုံရင် “မင်းကတော့ တကယ့်လူပါပဲကွာ” Whataman! လို့စမယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို Whataday! “တကယ့်နေ့ပါပဲဗျာ”လို့ညည်းပြမယ်။ ကိုယ်တစ်ခုခုမှားလုပ်မိရင် What an idiot! “တုံးလိုက်တဲ့ငါ” လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသံထွက်ကျိန်ဆဲလိုက်မယ်။ ဒီလို နှစ်ခါသုံးခါလောက် သုံးလိုက်ပြီဆိုရင် အဲဒီစကားဟာ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဒါဟာ အီဒီယံတွေ၊ ဘန်းစကားတွေလေ့လာတာမှမဟုတ်ဘဲ ဘယ်စကားမဆို ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။)
နည်းနာ ။ စာများများဖတ်ပါ။
အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်နှစ်ချက်စလုံးကို တစ်ချိန်တည်းမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ စာဖတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်နေတုန်းမှာ ကိုယ်မှတ်သားဖူးတဲ့ အီဒီယံအသုံး အနှုန်းတွေပြန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် အသုံးအနှုန်းအသစ်တွေကိုလည်းထပ်တွေ့မှာဖြစ်လို့ ကိုယ်ပြောဆိုနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ ထပ်တွေ့ဦးမှာပါ။့ ကိုယ်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကိုအသံထွက်ဖတ်ပြတဲ့ audio books တွေ၊ podcasts တွေရနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရေးထားတာမြင်ရရုံမကဘဲ ဘယ်လိုအသံထွက်သလဲဆိုတာပါ နားနဲ့ကြားယောင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကို သဘာဝကျကျ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောနိုင်အောင် ထူးခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ၊ ဘန်းစကားတွေကို စာဖတ်တိုင်း၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရုပ်ရှင်ဇတ်လမ်းတွေကြည့်တိုင်းမှာ သတိထားပြီးမှတ်သားနေသင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘန်းစကားတွေက နည်းနည်း ပညာသားပါပါတယ်။ သူတို့မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြောတဲ့စကား၊ တခါတစ်ရံမှာ အရွှန်းဖောက်ပြီးပြောတာမျိုး၊ ရွဲ့ပြီးပြောတာမျိုးတွေပါနေတတ်တော့ တဲ့တိုး ဘာသာပြန်လို့ခက်ပါတယ်။ ဘန်းစကားတွေဟာ မျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လူငယ်ထုကြားကစကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ ဆိုတာကို ၁၉၆၀ ၀န်းကျင်လောက်က "groovy", သို့မဟုတ် "far out" လို့ပြောခဲ့တာအခုတော့ဒီအသုံးတွေဟာ မတွင်ကျယ်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအစား "sweet", "the bomb" လို့ပြောင်းပြီးပြောလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် "cool" လိုမျိုး မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာခေတ်စားနေသေးတဲ့ အသုံးတွေလည်းရှိတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ပညာရပ်တစ်ခုဟာ စမိထားပြီဆိုရင် ဆုံးခန်းမတိုင်တော့ပဲ တစ်သက်တာလေ့လာသွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်မှ အဲဒီပညာရပ်မှာ လူတန်းစေ့ လူရာဝင်နိုင်မယ်လို့သာဆိုချင်ပါတယ်။)
Permalink Reply by 3o5yfnxd5lihe on November 29, 2012 at 17:03
Permalink Reply by Hanazono Shiroīyuki on November 29, 2012 at 17:08
Permalink Reply by zaw phyo naing on November 29, 2012 at 21:02
Permalink Reply by UMyo Min on November 30, 2012 at 11:56
Permalink Reply by Shwe Moe Nyo on November 30, 2012 at 12:16
Permalink Reply by kovida on January 6, 2013 at 11:58
Permalink Reply by Ratan Biswas on January 7, 2013 at 19:46
Permalink Reply by Ye' Paing Phyo on July 23, 2013 at 15:54
Permalink Reply by aungnaingthu on October 7, 2014 at 18:40
Permalink Reply by kyawmyo on January 22, 2015 at 23:05